Lekọta Franchises maka ọrịre | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Lekọta Franchises
Franchises Nlekọta Egosipụtara
Kacha ọhụrụ na-elekọta Franchises
Full ozu Circle Franchise
Mmekorita Omuma Onyinye zuru oke Franchise Onwetara Ememe Ọhụụ na-enye ọrụ olili ozu mmadụ kpamkpam, nke na-egosipụta onye ahụ n'ezie na…
Insteadlọ Kama Nlekọta Nnukwu
Insteadlọ Kama Nlekọta Ndị Isi - UK's No.1 franchise Home Kama nke nlekọta bụ ụlọ ọrụ UK nke mba 1.
Mmekọrịta n'ụlọ bụ Franchise na-emeri ọtụtụ n ’ụlọ ahịa na-achọ ndị ahịa azụmaahịa na-agba mbọ ka onye ọhụụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ….
Onu ogugu ndi mmadu na-abawanye ngwa ngwa ugbu a n'ihi ihe ebube nke nlekọta ahuike ugbu a. Ma na atụmanya ndụ na-abawanye ụwa niile nke a pụtara na ọtụtụ mmadụ ga-achọ ọrụ nlekọta maka ilekọta gị mgbe ị mere okenye. Ọ bụ nke a mere ụlọ ọrụ nlekọta na-eto ngwa ngwa ụwa niile kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a. Yabụ ọ bụrụ na ị na-elebanye anya na itinye ego na nlekọta nlekọta na nchekwube na mpempe ozi a ga - enyere gị aka inweta nghọta maka ụlọ ọrụ nlekọta na - eto ngwa ngwa.
Ndekọ nke ụlọ ọrụ nlekọta.
Anyị ga-edepụta ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị n'okpuru ebe anakọtara na afọ ndị gara aga gburugburu ụlọ ọrụ nlekọta iji gosipụta uto na ntọala ndị ahịa ga-eru na itinye ego na ohere dị otú a maka ịre ahịa.
Ahụike ahụike ụwa na-atụ anya ịhụ ịrị elu nke 5% buru amụma site na 2023.
Lọ ọrụ ahụike na-arụ ọrụ bara uru maka ijeri dọla 11 ijeri dọla n'ụwa niile.
Site na atụmanya ndụ na-abawanye, a na-atụ anya ịkpọlite ​​ọzọ na UK gaa 90 na 2030.
Ihe ihe ndekọ a gosipụtara maka ụlọ ọrụ nlekọta mba ụwa?
Ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi etu atụmanya ndụ si eto n’ike n’ike. Nke pụtara afọ iri ọ bụla ma ọ bụ karịa ka a ga-atụ anya na ndị mmadụ ga-ebi ogologo ndụ nke ga-anapụta nnukwu ndị mmadụ na-arịọ maka nlekọta ụlọ ma ọ bụ ụdị nlekọta ụfọdụ. Yabụ, nke a na-egosi mmụba ka na-eto n'ike n'ike, ọ ga-aga n'ihu n'afọ ndị ọzọ na-abịanụ. Ọzọkwa ngalaba niile ruru $ 11 trillion dollars n'ihi ya nke na-egosi ụbọchị ndị a enwere nnukwu ego enwere ike ịme na ngalaba nlekọta.
Mmechi gburugburu ngalaba nlekọta ụwa.
N'ozuzu oke choro ngalaba nlekọta na-aga n'ihu na-eto eto ruo afọ na afọ ndị na-abịa site na mmụba nke sayensị ọhụụ na nlekọta ahụ ike na-akawanye mma site ụbọchị anyị ga-amalite ịhụ ka atụmanya ndụ ga-abawanye na ọkwa anyị ahụbeghị mbụ. Agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị na-eche ụlọ ọrụ nlekọta abụghị iko tii gị ma ọ bụ na ị na-achọ ịchụ ụlọ ọrụ ọzọ gịnị mere ị ga - eji chọọ ndekọ ndekọ aha anyị maka franchise gburugburu ụwa.